» XOG: Musharaxiin Caan ah oo ka Haraya Tartanka Doorashada & Gor-gortan Socda…Badweyntimes.com
XOG: Musharaxiin Caan ah oo ka Haraya Tartanka Doorashada & Gor-gortan Socda…
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho ka socda kulamo Xasaasi ah oo u dhaxeeya Musharaxiinta u Ordaya Xilka M/weynaha Soomaaliya iyo Xildhibaanada Baarlamaanka sidoo kale waxaa jira kulamo gaar ah oo u dhaxeeya qaar kamid ah musharaxiinta.
Waxaa ololaha ka mida musharaxiin ka tirsan 23-ka qof ee u taagan xilka madaxweynaha oo qaarkodo la sheegay wadahadallo kadib in lagu qanciyay inay ka haraan tartanka doorashada madaxweynaha.
Wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegaya in ilaa afar musharax ay ogolaadeen inay ka tanaasulaan ololaha doorashada, iyadoo ay socdaan waanwaan hoose oo lagula jiro musharaxiintaasi oo uu ugu horeeyo Caddow Cali Gees, waxaana la hadal hayaan inay ka mid yihiin Musharaxiinta C/raxmaan Faroole iyo Bashiir Raage.
Hore waxaa isu casilay Eng. C/llaahi Cali Xasan kadib markii uu heshiis hoose la galay madaxweyne Xasan Sheekh oo ay isku beel kasoo wada jeedaan.
48-saac ee soo socota ayaa lagu wadaa inuu sii xoogeysto ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo Arbacadda ka dhici doona magaalada Muqdisho.
« Warbixinta Ka HoreysayDeg Deg+Sawiro: Ciidanka NISA oo fashiliyay Qarax Qorsheysan oo ka dhici rabay Muqdisho…
Warbixinta Xigto »Daawo: Ciidanka Itoobiya oo si xun u jirdilay Nabadoon Soomaali ah lana soo bandhigay…